🥇 ▷ Xiaomi Italia ayaa ku dhawaaqday badeecado cusub oo ah kuwa otomaatiga ah ee guryaha ✅
Xiaomi Italia ayaa ku dhawaaqday badeecado cusub oo ah kuwa otomaatiga ah ee guryaha
Shiinaha, siideynta cusub ee guriga Xiaomi sii wado qashinka, oo ay ku jiraan saacadaha smart, thermos ee carruurta, daahyada smart iyo cadayga korantada, si aad u magacawdo dhowr. Laakiin nasiib wanaag annaga maanta ayay sidoo kale noqotey Xiaomi Talyaani, iyada oo qaybteena maxalliga ah ay ku dhawaaqday badeecooyin cusub oo loogu talagalay deegaankeeda. Marka lagu daro lacagta ‘Xiaomi Mi 9T Pro’, waa kan waxa cusub.
Xiaomi Mijia Sifeeyaha Hawada 3 rasmi ah waadna iibsan kartaa horay
Waa kuwan aaladaha cusub ee ‘IoT’ ee uu shaaciyey Xiaomi Italia
Aan ku bilowno ka Xiaomi Mi Wireless Switch, ama badal kaas oo looga gudbi karo / demi karo hal muuqaal ah aaladaha kala duwan ee qalabka ‘IoT’ ee ku xiran shabakadda. Sidoo kale lagu hagaajin karo barnaamijka Mi ee app-ka, waxay leedahay batteriga soconaya 2 sano waxaana lagu iibiyaa qiimo ahaan € 14.99.
Marka tan la eego, dareemayaasha ayaa sidoo kale loo sameeyay si rasmi ah Daaqad ii waa Door Sensor, aalado loogu talagalay inay kormeeraan amniga gurigaaga. Haddii ay dhacdo in qof si sharci darro ah guriga galo, seenyaalaha acoustic iyo ogeysiin ayaa loo diri doonaa taleefanka gacanta ee la midka ah. Qiimaha had iyo jeer waa € 14.99. Waxa kale oo jira Mi Motion Sensor in la isku daro si loo ogaado dhaqdhaqaaq kasta oo laga shakiyo, marwalba a € 14.99.
Waxaan markaa u gudubnay dhanka Iskeelka Isugeynta Jirka 2, qiyaasta caqliga leh ee leh cabir cabir BIA oo isku dhafan, awood u leh cabbiraadda culeyska, muuqaalka jirka, baruurta iyo muruqyada, qoyaanka, heerka borotiinka, dufanka visceral iyo heerka dheef-shiid kiimikaad. Dhamaan qiimaha € 29.99.
Waxaan ku soo gabagabeynayaa badeeco aan kaftamayo inbadan, ama the Qalliinka Timaha Ionic. Waxaan kala hadlayaa timo-dhaqeyaha biyo-diidmo biyo-diidmo ah, teknolojiyad kuu oggolaaneysa inaad timahaaga ka dhigto mid jilicsan oo aad naaqusto korantada taagan ee sababa xanaaqa xanaaqa. Xaaladda jirta markaa qiimuhu waa € 39.99.